Codsiga Nidaamka Kuleylka ee Kuleylinta Tijaabinta Induction
Codsiyada Kuleylka ee Kuleylka Tijaabinta Mashiinka Mashiinka Sare
Codsigan kuleylka ah ee ku dhejinaya kateetarka ayaa badanaa looga baahan yahay Warshadaha Caafimaadka si loogu soo saaro tuubooyinka dhuunta.
Iyadoo la siinayo tuubada tuubada induction, tamarta RF waxay kor u qaadeysaa heerkulka birta birta ah ama caaryada naxaasta ah, iyadoo aan jir ahaan lala xiriirin caaryada ama adeegsan olol furan. Caarada kateetarka ayaa markaa la sameeyaa iyadoo la gelinayo tuubada balaastigga ah kululaynta kuleylka ama caaryada si ay u noqoto geesaha wareega. Dhamaadka wareega ah ee tuubbada tuubbada ayaa u oggolaaneysa tuubada in si nabdoon loo geliyo bini'aadamka iyada oo ay ugu yar tahay dhaawac soo gaara unugyada jirka. Caaryadu waxay sidoo kale yeelan doontaa silig galiya tuubada si looga hortago sameynta xirmo. Awoodaha xakamaynta heerkulka saxda ah ee saxda ah ee soo-saarista ayaa ku habboon noocan ah dalab caafimaad oo sax ah. Qaababka waxaa badanaa lagu dhejiyaa jaakad biyo-qaboojiye ah oo loo isticmaalo in lagu qaboojiyo caaryada kuleylka ah dib loogu celiyo heerkulka bilowga ah ee qeexan kaas oo awood u siinaya habka soo-saarista in lagu kaxeeyo aag waqti go'an / wareeg ah.
Qalabka kuleylka kuleylka tipping catheter waxay xaqiijineysaa darajo weyn oo soo noqosho ah. Nidaamka wax soosaarku waa mid dhakhso badan oo sax ah.
Tijaabinta Kateetarka caadi ahaan waxay u baahan tahay awood hoose. HLQ waxay leedahay dhowr qaybood oo awood hooseeya ah oo kufiican tuubada tuubada waxayna kugula talin doontaa qalabka saxda ah iyadoo lagu saleynayo qaybaha iyo shuruudaha dalabka gaarka ah.
Kuleylinta Tijaabinta Kateetarka Dhinta
Ujeeddo: Si loo kululeeyo faleebada aluminium ee aluminiumka ah u dhin illaa in ka badan 2850F gudahood 2 illaa 5 ilbiriqsi oo ah sameynta maaddada kateetarka. Waqtigan xaadirka ah, kululaynta waxaa lagu sameeyaa 15 ilbidhiqsi iyadoo la adeegsanayo qalab soo-saarid duug ah. Macaamiilku wuxuu jeclaan lahaa inuu isticmaalo xaalad adag Qalabka kululeynta la-galinta si loo yareeyo waqtiyada kuleylka loona horumariyo hanaan wax ku ool ah.
Waxyaabaha: Tuujinta kateetarka Aluminiumku wuxuu u dhintaa cabbirka 3/8 ″ OD iyo 2 ″ dheer oo leh gacmo aan magnetik ahayn oo ka sarreeya aagga kuleylka. Maaddada kateetarka ayaa lagu tilmaamay inay la mid tahay bacda polyurethane. Sidoo kale, silig bir ah oo dhererkiisu yahay 0.035 ″
waxaa la geliyay tuubada tuubada si looga hortago inay duusho.
Codsiga: DW-UHF-3kW korantada soosaarida korantada ee adag ayaa loo go'aamiyay inay si hufan u soo saarto natiijooyinka soo socda:
- Waqti kululeyn ah 3.3 ilbidhiqsi si loo gaadho 5000F loona sameeyo kateetarka ayaa lagu gaadhay iyada oo la adeegsanayo laba (2) ka badan laba (2) jeer oo xarig ah.
–Kateetar tayo leh ayaa la sameeyay iyadoo la riixayo 1/2 ″ ee tubada polyurethane caaryada iyadoo la ilaalinayo qaabka iyadoo la adeegsanayo silig 0.035 to ah si looga hortago inuu ku burburo tuubada. Natiijooyinka shaybaarka waxay muujinayaan in waqti dhimis la taaban karo la sameeyay taasoo u oggolaan doonta koror ballaaran oo soo-saarka ah iyadoo aan loo hureynin tayada.
Qalabka kuleylka ee induction: DW-UHF-3kWkW koronto gelinta soosaarida adag oo ay ku jiraan saldhiga kuleylka fog oo ka kooban hal (1) capacitor wadar ahaan ah 1.2 µF.
Joogtaynta: 287 Khz
Categories Technologies Tags Tijaabinta Kateetarka, Tijaabinta Kateetarka Brazing, Kuleylinta Tijaabinta Kateetarka, tuubbada tuubada tuubada, Tijaabinta Kateetarka Induction, induction Kateetarka Tijaabinta Brazing, Kuleyliyaha kuleyliyaha kateetarka, Tijaabinta Kateetarka RF, Kateetarka RF ee xargaha xargaha, Kateetarka foojignaanta RF Post navigation